Kpido: instagram | Martech Zone
Usoro 7 na-aga nke ọma Mgbakwunye Marketers na-eji na-ebuba ego na ụdị ndị ha na-akwalite.
Mgbakwunye ahịa bụ usoro ebe ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike nweta ọrụ maka ịzụ ahịa akara, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ ọzọ. Ị maara na ahịa mmekọ na-eduga azụmahịa mmekọrịta yana ọ nọ n'otu egwuregwu dị ka ahịa email maka ịmepụta ego n'ịntanetị? Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-eji ya, ya mere, bụ ụzọ dị mma maka ndị na-eme ihe na ndị na-ebipụta akwụkwọ iji tinye ya na ọrụ ha. Mgbakwunye ahịa Key Statistics Mgbakwunye ahịa ahịa ihe karịrị
Afọ iri gara aga abụrụla otu nnukwu uto maka ịre ahịa influencer, na-ewepụta ya dị ka atụmatụ a ga-enwerịrị maka ụdị na mbọ ha na-eme iji jikọọ na ndị na-ege ha ntị. Atụkwasara arịrịọ ya ka ọ ga-adịgide ka ọtụtụ ụdị na-achọ ka ha na ndị na-eme ihe na-akpakọrịta iji gosipụta izi ezi ha. Site na ịrị elu e-azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mweghachi nke mgbasa ozi na-emefu maka ịzụ ahịa mmetụta sitere na telivishọn na mgbasa ozi na-anọghị n'ịntanetị, yana ịba ụba nke ngwanrọ igbochi mgbasa ozi na-egbochi.